एउटा पूर्खाले जन्माएको कमल र लिलि फूलबारे - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
एउटा पूर्खाले जन्माएको कमल र लिलि फूलबारे
साउन २४ गते, २०७४ - १०:४७
नयाँ अध्ययनले सुझाएको प्राचीन फूलको स्वरुप
सबै जीवित फूलहरु १४ करोड वर्ष पहिलेको एउटा पुर्खा फूलबाट विकसित भएको नयाँ वैज्ञानिक अध्ययनले बताएको छ । वैज्ञानिकहरुले फूलको विकासक्रमका नमूनाहरु हेरेका थिए । त्यसक्रममा अहिलेसम्मकै सबभन्दा धेरै जीवित फूलका प्रकारहरु जम्मा पारेर ती फूलको प्रकृति अध्ययन गरिएको थियो । वैज्ञानिकहरुले विभिन्न विश्लेषण पछि पुर्खा फूलको आकारप्रकार अनुमान लगाएका थिए ।
सोचेको भन्दा परिणाम निकै कम जटील पाएको उनीहरुले बताएका छन् । आधुनिक वाटर लिलिसँग मेल खाने पुर्खा फूलमा पुष्पपत्ताहरु तीनवटा समूहमा रहेका, एक केन्द्रिकृत वृत्त वरपर फैलिएका र एकभन्दा बढी भाले र पोथी अंग रहेका वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । अनुसन्धानकर्ताहरुले आफ्ना खोजलाई जीवाशेषसँग दाँज्न पाए हुन्थ्यो भनेका छन् ।
कमल (दायाँ) र लिलि (बाँया) फूलहरु
नेचर कम्युनिकेशनमा प्रकाशित लेखका एक लेखक युनिभर्सिटी प्यारीस सड फ्रान्सका हार्भे सौकेटले भने, “पुर्खा फूलसँग ठ्याक्कै मेल खाने फूल अहिले जीवित छैन । तर होस पनि कसरी। त्यो फूल चौध करोड वर्ष अघि फुलेको थियो जुन आज अनेक प्रकारका फूलमा विकसित भएको छ ।” सौकेटले भने, “हामी फूलको सुन्दरतासँग परिचित छौं । त्यसको प्रजनन अंगहरु अहिले जीवित ९० प्रतिशत विरुवाको जस्तै थियो । तर तीनको उत्पत्ति र शुरुको विकास क्रम भने रहस्यकै रुपमा छ। अहिलेको फूलको पुर्खा मानिएको त्यसबेलाको फूलको जीवाशेष फेला परेको छैन ।”
अध्ययनमा संलग्न नभएका युनिभर्सिटी अफ बर्मिङघम यूकेका डा. जेसन हिल्टनले भने- “पुर्खा फूलको आकार र त्यसको संरचना अहिलेसम्म रहस्यकै रुपमा छ । उदाहरणका लागि पुराना फूलहरु एकलिङ्गी थिए कि दुई लिङ्गी ? तिनको परागसेचन हावाले गर्थ्यो कि किराले भन्ने हामीलाई थाहै छैन ।”
साउन २४ गते, २०७४ - १०:४७ मा प्रकाशित